Zvikoro Hazvina Kuchengeteka – BullyingCanada
Zvikoro Hazvina Kuchengeteka
/ Zvikoro Hazvina Kuchengeteka
MuNhau November 9, 2021
Vanopfuura hafu yevadzidzi vakabatwa nekudheererwa vaidavira kuti vanodheerera vavo vaigona kukanganisa zvaifungwa nevamwe vadzidzi nezvavo.
Vadzidzi vaidheererwa kazhinji vaitambura zvibodzwa zvakaderera mumakirasi avo.
Sezvo vadzidzi vachikura, kashoma kuti vataure kushungurudzwa.
Mudzidzi mumwe pavashanu anodheererwa mukati megore rechikoro. Ndiyo 1%. MuAmerica moga, kune vadzidzi vane mamirioni 5 vakanyoresa muchikoro mugore rakapiwa. Ndiko kuti 15.36 miriyoni vadzidzi vari kushungurudzwa mugore rimwe rechikoro.
Izvi zvinongori zvishoma chokwadi, uye kubva muna 2019 COVID-19 isati yatora nyika. Munguva yekuvhara uye chikoro kubva kumba, iwo manhamba angangochinja kusvika padanho. Cyberbullying yaive yakadzikira pane dzimwe nyaya dzakataurwa asi, semunhu wese adzokera kuchikoro, izvo hazvisi kuzogara.
Manzwi Evanotambudzwa (6)
OPP inoti cyberbullying iri kuwedzera muzvikoro zveKenora March 20, 2022
Zvinorevei Kupemberera Pink Shirt Day February 18, 2022
Zvikoro Hazvina Kuchengeteka November 9, 2021
Rwendo rwakazara rwedenderedzwa: Kuunza Cloudflare Canada - Intelligent CIO North America April 29, 2021